Murtee:Diinota keenya mataa cabsuufi saba keenya onnachiisuuf har’aa eegalee, – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsMurtee:Diinota keenya mataa cabsuufi saba keenya onnachiisuuf har’aa eegalee,
Murtee: Diinota keenya mataa cabsuufi saba keenya onnachiisuuf har’aa eegalee.
“Guyyaa har’aa Dambidoollotti naannoo yesuusii jedhamutti waraana biltsiginaa patiroliin deemaa jiru irratti waraanni WBO tarkkanffi jabaa fudhatee baay’een isaanii ajjeesee wareegamanii paatiroliin oraliin harkifamee gale.waraanni mootummaa immoo aarin iddooma kanatti namoota nagaa dargaggoota 3ajjeesanii jiru.”
Dhaloonni kaayyoo Oromoof gaachana ta’an kitila; kunneen shira har’a ABO irratti aggaammatame, kanneen qolachaa jiranii dha.
#Bilisummaan Oromoo dhugaa dha!
Diinni Oromoo ni kufa!
#FreeOromia #OromoProtests #ABO #OLF #NewGeneration #Irbuu
Odeeffannoo:“Miseensonni Gumii Shanee har’a walgahii Gullalleetti Beekamtii Hayyu Duree malee ta’an keessaa.waa’ee namoota kanaa kan beektan dhuguma miseensota gumee shaneetii jarri kuni? moo ergamtoota bilxiginnaati?
“Walgahiin Gullallee har’aa borutti darbee ganama hanga waaree duraatti taasifama.Ibsa kennuuf miidiiyaaleen Habashaa fi kan mootummaa waamamaniiru.osoo mari’atanii irratti walii hin galin wal hubannaa malee gargar faca’an.Ibsa Maalii kennu kan walumaan dhageenyu ta’a.”
Abiy dhiheenyatti akka kufu waa heddutu akeeka. Garuu inni dhokfatee of jajjabeessee jibbaata godhaa jira. Oromoon haaluma amma itti jiruun qabsoo isaa jabeessee itti fufnaan amma kufa. Dhihootti waan harka kennatu natti fakkaata yeroo laalu.
Itoophiyaan MM Abiy Ahimad ijaaruuf deeman kan akkamiiti?
Yaadni qeeqxonni MM Abiy irratti irra-deddebbiin kaasan keessaa tokko ilaalcha dhimma Oromummaa/sabboonummaa fi Itoophiyuummaa isaaniiti.
Hooggantoonni mootummaa immoo MM Abiy dabalatee ‘sabboonummaan fesbuukiin miti hojiin mul’achuu qaba’ jechuun kanneen isaan qeeqanif deebii kennu.
Wal himannaan akkanaa garuu amma eegale miti. Waggaa lama dura yeroo MM Abiy Ahimad Ameerikaatti imalan sanas ijoo dubbii ta’ee ture.
Yeroos, hawaasni sabaaf sab-lammootaa Itoophiyaa biyyoota alaa keessa jiran qofa qofa socho’uurra hawaasa Itoophiyaatti akka makaman waamicha dhiheessanirraa eegala.
Gariin Itoophiyummaan Dr. Abiy irraa haasa’an kan eenyummaa sabootaa of jalatti hammatedha yoo jedhan gariin ammoo kan eenyummaa sabummaaf beekamtii hin laannedha jechuun komatu.
“Itoophiyummaan eenyummaa lammummaati, Oromummaan ammoo eenyummaa sabummaati, kun eenyummaa gara garaa garuu wal-maddii deemuu danda’udha,” jechuun himu Dr Birhaanuu Magarsaan.
Gama kaaniin Dr Ittaanaa Habteenimmoo, “Itoophiyaawinnatiin maqaa Itoophiyaa uffatee eenyummaa sabootaa balleessudhaaf deema, Oromummaan ammoo kana hin hayyamu,” waan ta’eefis eenyummaan kunneen lamaan araaramuu hin danda’ani jechuun himu.
Akkamiin walitti araarsuun danda’ama? Lamaanuu deebii qabu.
“ኦነግ የህወሓት ፈረስ ነበር” የኦ/ክ/ፕረዚዳንት ኦቦ ሽመልስ
“አሸባሪ እኛው ነን” ጠ/ሚና አብይ በአንድ ወቅት ላይ
ለ VIP ሰዎች ጠባቂዎችን መመደብና ማንሳት የእኛ ሥራ ነው የጀዋር ጠባቂዎች እኛ ነን እንድነሱ ትዕዛዝ ያስተላለፍነውን።
የኦሮሚያ ክልል ፕረዚዳንት-የጀዋር ጠባቂዎች በሌሊት እንድነሱ ያዘዛቸውን አካል ለህግ እናቀርባለን።
የመከላከያ ሚኒስቴር ሚኒስተር ኦቦ ለማ -በሌሊት የጀዋር ጠባቂዎች እንድነሱ ትዕዛዝ ማስተላለፍ ስህተት ነው። ይህንን ያደረጉትን ለህግ ለማቅረብ ፅኑ አቋም አለን።
ጠ/ሚ ስህተት መፈፀሙን አምነው ስህተቱን ለህዝብ ከመናገር ተቆጠቡ
የኦሮሚያ ኮሚኒኬሽን ኃላፊ- ልዩነት እየሰፋ ስመጣ ወርሃ #ግንቦት ውስጥ ለ 86 ሰዎች ሞት ተጠያቂው ተከበብያለሁ ያለው ሰው ነው አሉ።
ትዕዛዙን ያስተላለፈው (በወቅቱ ሁሉም ስህተት ነውና ይህንን ትዕዛዝ የሰጡትን ለህግ እናቀርባለን ያሉትን) የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ዛሬም ስልጣን ላይ ሆኖ እነ ጀዋር የሃጫሉን ሬሳ ተቀምተው….እያለ መግለጫ ይሰጣል።
Diinota keenya mataa cabsuufi saba keenya onnachiisuuf har’aa eegalee, yeroon qabsoof oolchu dachaan dabaluuf murteeffadheera.
Hojiin kanaan dura hojjadhu irratti dabaluun, #OMN fi #KFO gargaaruuf murteeffadheera.
Hojii qabsoo bilisummaa hojjachuun umurii diina keenyaa haa gabaabsinu!!
#ABO #KFC #OMN gargaaruun Bilisummaa Oromoo ariifachiisuu dha!